Zvakaitwa Nekuwedzera KwemuDominican Republic | Bhuku Regore ra2015
‘Vanhu Vemarudzi Ose Vanofanira Kuponeswa’
Jehovha anoda kuti “vanhu vemarudzi ose vaponeswe uye vasvike pakuva nezivo yakarurama pamusoro pechokwadi.” (1 Tim. 2:4) Maererano nemaonero aya anoitwa naMwari, Zvapupu zvaJehovha muDominican Republic zviri kuedza nepose pazvinogona kuti zvitaure nevanhu kwose kwose munyika yacho, kusanganisira vari mumajeri.
Muna 1997 mamwe mapiyona chaiwo aishanyira jeri reNajayo muSan Cristóbal vhiki yoga yoga. Rimwe zuva vakasangana naGloria, mukadzi wekuColombia aiva nemakore 23 aipika jeri nemhaka yekubatwa aine zvinodhaka. Aimbokurukura nehanzvadzi yaipikira mhosva yaisina kupara. Kuti abatsire Gloria kuwana mhinduro dzemibvunzo yake ine chekuita neBhaibheri, mapiyona acho akamuunzira bhuku raKukurukurirana Tichishandisa Magwaro nemamwe mabhuku. Kushingaira kwaaiita pakudzidza Bhaibheri kwakaita kuti vamwe vasungwa vadewo kudzidza, zvekuti boka raishanyirwa nemapiyona acho rakaramba richikura.
Chokwadi chakaita kuti Gloria achinje zvinoshamisa, uye muna 1999 akakwanisa kuva muparidzi asina kubhabhatidzwa. Mwedzi wega wega aiita maawa anopfuura 70 achiparidza mundima yake yemujeri, uye aiitisa zvidzidzo zveBhaibheri 6 zvaifambira mberi. Muna 2000, akanyorera kuti asunungurwe nenyasha dzapurezidhendi achibva abvumirwa nemhaka yeunhu hwake hwakanaka. Akasunungurwa ndokubva adzoserwa kuColombia. Muna 2001, achangosvika munyika yake, akabhabhatidzwa kunyange zvazvo vemumhuri yake vaipikisa zvakasimba chisarudzo chake.
Gloria Cardona akadzidza chokwadi ari mujeri. Iye zvino ari kupayona nemurume wake
Gloria paakabhabhatidzwa akatanga kupayona. Akaroorwa nemukuru muungano, uye vose mapiyona enguva dzose. Pari zvino vari kushumira munzvimbo inodiwa vaparidzi vakawanda muColombia. Gloria abatsira vadzidzi vake vanoverengeka kuti vazvitsaurire uye vabhabhatidzwe. Anoti anonzwa aine chikwereti kuna Jehovha, uye kuti amubhadhare anofanira kuitira vamwe zvaakaitirwa, kuvabatsira kuziva chokwadi.
Zvakaitika kuna Gloria zvinoratidza kuti jeri haritadzisi vasungwa kudzidza chokwadi chinoponesa. Pane imwe nguva vamiririri vakabva kubazi vakaita musangano nevakuru vakuru vanoona nezvemajeri kuti vakumbire mvumo yekuti hama dzipinde mune mamwe majeri kuti dziitise zvidzidzo zveBhaibheri. Izvi zvakaita kuti hama 43 nehanzvadzi 6 dzipiwe magwaro anodzibvumira kuita basa rekudzidzisa Bhaibheri mumajeri 13.
“Rebesa Tambo Dzako Dzetende”
Pakazosvika gore ra2000, Dominican Republic yainge yava nevaparidzi vemashoko akanaka 21 684 muungano 342, uye zvidzidzo zveBhaibheri 34 380 zvainge zvichiitiswa. Vakapinda Chirangaridzo vaiva 72 679. Nemhaka yekuwedzera uku, vanhu vaJehovha vakakurumidza kuita maererano nemashoko aIsaya anoti: “Wedzera kwazvo nzvimbo yetende rako. Ngavatambanudze machira etende etebhenekeri yako huru. Usarega. Rebesa tambo dzako dzetende.”—Isaya 54:2.
Rimwe dambudziko raiva rekuti vave neImba yeMagungano inokwana vaparidzi vaiwedzera. Muna 1996 Imba yeMagungano yakabatana nebazi muSanto Domingo yakapera kuvakwa, uye yaishandiswa neungano dzemuguta guru nenharaunda dzakapoteredza. Zvisinei, Imba yeMagungano yemuVilla González, iyo yaishandiswa nedzimwe ungano dzose dzemunyika yacho, yaitoda kugadziridzwa kana kutsiviwa neimwe.
Muna 2001, Dare Rinodzora rakabvumira kuti pavakwe Imba yeMagungano inopinda vanhu 2 500 pasitendi yemuVilla González. Hama dzakafara zvikuru kunzwa kuti paizovakwawo chivako chaikwanisa kuitirwa Chikoro Chokudzidzisa Vashumiri (iye zvino chakatsiviwa neChikoro Chevazivisi veUmambo). Chaizenge chakabatana neImba yeMagungano uye chaizova nedzimba dzekugara, kirasi yekudzidzira, raibhurari, kicheni, uye imba yekudyira. Muna 2004, Hama Theodore Jaracz veDare Rinodzora vakapa hurukuro yekutsaurira zvivako zvacho zvitsva. Kubva ipapo, chikoro ichi chapindwa nemakirasi 15.